samedi, 01 décembre 2018 16:23
Primatiora: Heloky ny zanaka, heloky ny ray?
Miazakazaka ny toe-draharaha eo anivon'ny primatiora, fa dia taorian'ny fisamborana ilay miaramila nidaroka ilay Mpisolovava, dia re izao fa efa eo ambony latabatry ny Praiminisitra, miandry ny sonia, ny taratasy fanesorana ny Jeneraly Armand, Talen'ny fiarovana ny fiadidian'ny primatiora, izay rain'ilay nidaroka.
Ny fanambarana nataon'ny teo anivon'ny primatiora anikeo maraina moa dia nilaza fa tsy anaiky lavatanana amin'izao raharaha izao. Nampitandrina an'ity Tale ity ve izany?
Nanana ny filazany kosa anefa tetsy andaniny ireo nilako ilay Mpisolovava i Arnaud sy Erlie.
samedi, 01 décembre 2018 14:02
Tsaralalana Police centrale: Nidoboka violon ilay miaramila nilako Mpisolovava
Tsy niandry ela, fa avy dia nosamborina ilay miaramila, zanaka sy mpiandry ilay jeneraly talen'ny fiarovan'ny primatiora.
Mandeha ny famotorana, nesorina aminy avokoa ny fitaovam-piadiana sy ny basy tany aminy ary dia nahiditra violon, miandry ny fanolorana azy ny fampanoavana.
Fantatra ihany koa fa nametraka fitoriana ny Holafitry ny Mpisolovava.
samedi, 01 décembre 2018 12:34
Fenoarivo Atsinanana: Inauguration du nouveau Palais de Justice
Le Chef d’Etat par intérim Rivo Rakotovao, accompagné du Garde des sceaux, Ministre de la justice, Harimisa Noro Vololona, a inauguré le nouveau Palais de Justice de Fenoarivo Atsinanana, le 30 novembre 2018.
La Ministre Harimisa Noro Vololona, a expliqué qu’avant la construction du Palais, des audiences foraines ont été menées à Soanierana Ivongo, à Vavatenina, à Sainte-Marie, ainsi qu’à Fenoarivo Atsinanana.
samedi, 01 décembre 2018 12:33
Faritra Boeny: Nanondrana drakaka 21 380 taonina ny taona 2017
Nahatratra 21 380 taonina ny drakaka niala tato aminy faritra Boeny tamin'iny taon-dasa 2017 iny, raha 6 421 taonina kosa ny makamba noho ny fisian'ireo ala honko voaro.
75 000 hekitara hatreto no velarantany misy ny ala honko aty amin'ny faritra Boeny, ka any amin'iny distrika ny Solala iny, ny ao Bombetoka, ny any Mahajamba, sy ao Mitsinjo, dia ny sahandriakan’ny Mahavavy Kinkony no tena betsaka ahitana ny ala honko.
Voararan'ny lalàna manankery eto aminy tany sy ny firenena ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny ala honko, koa manentana ny olona ireo tomponandraikitra fa ady ifarimbonana ny fiarovana ny ala honko mba tsy ho lany tamingana sy hanao tan-tsoroka amin’ny voly ala honko.
samedi, 01 décembre 2018 12:03
Champs Elysées Frantsa: Raikitra vao maraina ny sakoroka
Nifamotoana vao maraina ao Paris Champs Elysées ireo Frantsay mitaky ny fampidinana ny vidi-tsolika, sy fijerena ny vidim-piainana izay midangana tokoa. Grenady mandatsa-dranomaso anefa no nitsena azy ireo.
Tamin'ny sabotsy lasa teo moa dia nifanaritaka tateraka teo amin'ity arabe malaza any Frantsa ity.
samedi, 01 décembre 2018 11:30
Etraketraka: Mpisolovava voalakon'ny miaramila
Maramila mitam-basy, mpiambina Jeneraly talen'ny fiarovana ao amin'ny primatiora no nilako Mpisolovava iray io marainan'ny asabotsy io.
Raha ny fantatra, dia avy nirevy izy ireo, ka nifampikasoka tamin'ny fiara nentin'ilay Mpisolovava. Raikitra ny lako sy daroka, miaraka fandrahonana amin'ny basy.
Fantatra fa miaramila kilasy voalohany, mpiambina ny dadany ihany ity miaramila miasa ao amin'ny primatiora ity.
Nanao fanambarana moa ny eo anivon'ny primatiora hanokatra fanadihadiana mahakasika izao tranga izao, ary mampitandrina izay mikasa hanao lavatanana.
Etsy an-kilany dia nanao fanambarana koa ny eo anivon'ny Polisim-pirenena fa tsy polisy io nikasi-tanana io, ary hanao valan-dresaka ho an'ny mpanao gazet izy ireo anio atoandro etsy Anosy.
samedi, 01 décembre 2018 10:34
Rajaonarimampianina: Tsy hanohana na iza na iza
Tamin'ny fifidiana ho Filoham-pirenena, fihodinana voalohany, dia nitana ny laharana faha telo ity kandida filoham-pirenena teo aloha ity, tamin'ny salan'isa 8.82%, isam-bato faran'izay kely indrindra azon'ny filoha nilatsaka hadimby ny tenany hatramin'izay tantaram-pifidianana teto Madagasikara.
Nanambara ity farany fa hipetraka ho Ray aman-dreny ka tsy hanohana an'ireo tafita amin'ny fiodinana faharoa izay atao ny 19 desambra izao.
samedi, 01 décembre 2018 10:33
USA: George Herbert Walker Bush décédé
Le 41ème Président des Etats-Unis vient de décéder à l'âge de 94 ans, juste quelques mois après la mort de sa femme Barbara.
Bush père est connu comme le diplomate qui a géré la fin de la guerre froide mais également connu pour la crise du Koweït de Saddam Hussein.